Nhau - Shanghai Copak Viwanda Co, Ltd. Kutsvaga Hofisi MuShanghai
Shanghai COPAK Viwanda Co, Ltd. yakavambwa muna2015, iine hofisi yekutengesa muShanghai nefekitori yakabatana muZhejiang. COPAK inyanzvi yekutengesa Eco-inoshamwaridzika chikafu & chinwiwa kurongedza zvigadzirwa: PET makapu, PET mabhodhoro, Mapepa mbiya, nezvimwe.
Hofisi yedu mushanghai inonyanya kufunga nezvekutengesa kwepasi rese uye kwehunyanzvi kutsvaga. Kunze kwePET CUPS, PET BOTTLE, PAPER BOWLS, tinogona zvakare kutengesa zvimwe zvigadzirwa. Yedu nyanzvi yekutsvaga timu inokwanisa kuwana mhando yepamusoro uye yemakwikwi zvigadzirwa zvigadzirwa. Isu tinosimbisa 100% yekuongorora isati yatumirwa.
Yedu Shanghai yekutsvaga mahofisi inoshanda seinotevera maitiro.
Kana vatengi vachida chimwe chinhu chatisingagadzire (PET CUP, PET BOTTLE uye PAPER BOWL zvinopihwa nefekitori yedu), tichaongorora zvese zvinodiwa zvinosanganisira ruvara, chimiro, mashandisiro uye kudhinda kana kurongedza, ipapo tinobva tagadzira chigadzirwa chaicho yako uye uwane mutengo kubva kumafekitori. Mushure mekuenzanisa mhando nemutengo, isu tichashanyira fekitori uye kuyera iyo fekitori kubva kune akawanda maficha senge yekugadzira mitsara, yekugadzira kugona, fekitori nharaunda uye nevashandi vavo uye mhando kutonga. Ipapo isu ticha sarudza iyo chaiyo yekushandira pamwe. Mushure mekunge kugadzirwa kwavo kwapera, isu tinotumira vakazvipira emhando yekuongorora kuti vaongorore zvigadzirwa. Ipapo kutumira kunogona kurongwa.
Vamwe vanhu vanogona kunetseka nezvehunhu. Muchokwadi, tinoita 100% yemhando yekutarisa isati yatumirwa. Uye zvakare isu tine mhando yevimbiso system. Kana iwe uchinyatso kuwana chero matambudziko nezvigadzirwa zvedu, Ingotumira mavhidhiyo uye mifananidzo. Tichadzorerazve yakanaka mhando yezvinhu panzvimbo peChinokanganisa chigadzirwa kwauri zvakare.
Nezve mutengo, inofanirwa kukwikwidza. Takawana mutengo mushure mekuenzanisa angangoita gumi nemashanu mafekitori. Hatimbove nepundutso zhinji. Tine purofiti mutemo pasi pe10% chete. Isu tinoziva zvakanyanya nemusika weChinese uye tinogona kuwana mutengesi akanaka kwauri. Zvakare iwe unogona kutenga chero chinhu chaunoda kubva kwatiri, iwe haufanire kutsvaga vashambadzi pachezvako. Iwe unogona kuziva kuwana mutengesi zvakaomarara uye hazvisi nyore kuwana yakanaka.
Vashandi vedu vanogona kutaura Chirungu, Spanish, Arabic. Ingonzwa wakasununguka kuti utaure nesu. Emails, kukurukurirana pamhepo, kana kufona zvese zvinogamuchirwa.